प्रभु इन्स्योरेन्सको नाफामा वृद्धि, प्रतिसेयर आम्दानी कति ? - Arthatantra.com
प्रभु इन्स्योरेन्सको नाफामा वृद्धि, प्रतिसेयर आम्दानी कति ?
काठमाडौं । प्रभु इन्स्योरेन्सले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विरणअनुसार असोज मसान्तसम्ममा छ करोड ५४ लाख ७७ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ ।
गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा खुद नाफा १६ दशमलव १७ प्रतिशतले वृद्धि गरेको हो । समीक्षा अवधिसम्ममा कम्पनीको खुद बिमा शुल्क आम्दानी छ दशमलव १४ प्रतिशतले बढेर २३ करोड ६५ लाख ८६ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । कम्पनीको बिमा कोषमा ८३ करोड २८ लाख रुपैयाँ छ ।
प्रभुको जगेडा कोषमा नौ दशमलव ७६ प्रतिशतले बढेर २५ करोड ८३ लाख ७४ हजार रुपैयाँ जम्मा भएको छ । यस अवधिसम्ममा इन्स्योरेन्सको प्रतिसेयर आम्दानी भने छ रुपैयाँ कायम भएको छ । त्यस्तै, कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ २०१ रुपैयाँ छ ।
वि.सं.२०७८ मंसिर २ बिहीवार १३:३३ मा प्रकाशित
अघिल्लाे सर्वोच्च रमिता : बाहिर वकिल कुटिए, भित्र मुद्दा छिनिए
पछिल्लाे जहाँ दुई सय रुपैयाँमा पाईन्छ मान्छेको भरिया सुविधा